Accueil > Gazetin'ny nosy > Freddie Mahazoasy: “Disadisa ny depiote iray no hanonganana ny Praiminisitra”
Freddie Mahazoasy: “Disadisa ny depiote iray no hanonganana ny Praiminisitra”
Nanao fanambarana ny filoha lefitrin’ny antenimierampirenena izay avy any amin’ny faritanin’ Antsiranana Mahazoasy Freddie omaly alakamisy faha 02 novambra 2017 tetsy Tsimbazaza mahakasika ny depiote izay manomana ny fanonganana ny praiminisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana. Nambarany tamin’izany fa tena misy ny tetika io ary efa misy ny manao sonia izany. Tsy olona any ivelan’ny vondrona parlemantera mpomba ny filohampirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny fitondrana misy amin’izao fotoana izao no mitarika azy ity fa ao anatin’ny fitondrana tanteraka. Nefa dia aoka hazava ny raharaha hoy ingahy depiote Mahazoasy fa tsy ny filoham-pirenena velively no aorian’izany. Raha nisy izany dia misy rafitra ato amin’io vondrona io ka tsy maintsy nisy ny fivoriana momba izany. Ny fanentanana ataon’ilay depiote ity ato amin’ny solombavambahoaka dia miharo lainga hoy ihany ingahy Mahazoasy. Raha ny fahafatarana ny fanonganana an’ingahy praiminisitra lehiben’ny governemanta Solonandrasana Olivier Mahafaly izao. Raharaha manokana ivelan’ny fitondrana izy ity. Tsy anjaran’ny depiote velively ny fanendrena minisitra izay isan’ny manahirana ity depiote sadasada ity hoy hatrany ingahy Mahazoasy. Noho izany dia tsy mankasitraka izao fihetsik’ity depiote ity izao ingahy Mahazoasy ny vondrona parlemantera momba ny filohampirenena raha ny voalazany.
Ny fanadihadiana sy ny loharanom-baovao hafa indray no nahafatarana fa ingahy depiote Randrianasolo Jean Nicolas, izay voafidy tany Betroka no tena manao ny fanentanana sy fanangonan-tsonia amin’ity fanonganana ny praiminisitra ity. Ny mahagaga dia milaza fa avy any amin’ny filohan’ny repoblika no maniraka azy raha ny voalazan’ny depiote ao Tsimbazaza ihany koa. Ny depiote avy any Betroka ity dia tena mpomba ny fanjakana tanteraka ary isan’ireo miady sy mikely aina amin’ny fanohanana ity fanjakana ity. Tsy mazava intsony ny zavatra tian’ny fitondrana misy amin’izao fotoana izao. Iza no tena marina, ny voalazan’ingahy Mahazoasy ve sa ny ambaran’ingahy Jean Nicolas Randrianasolo satria dia samy milaza fa akaikin’ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina avokoa izy roalahy ireo? Ny azo lazaina dia mikorontana ny fanjakana entin’ingahy Hery Rajaonarimampianina, ary mifanipaka anatiny. Tsy voafehiny intsony ny olona mpomba azy fa samy manao izay hataony. Ny fanjakana koa tsy manana fanapahan-kevitra hamahana ny olana. Ady an-trano sy disadisa anatiny tsy misy fijanonany no hita ankehitriny. Ho hitantsika ihany izay ho fiafaran’ity raharaha ity. Raikitra izany ny ady amin’ny samy mpanohana ny fanjakana tarihin’ingahy Hery Rajaonarimampianina. Tsy maintsy rava moa ny fanjakana miady an-trano, ka asa na ho marina izany amin’ity raharaha ity satria endrika iray amin’ny zava misy amin’ny HVM no miseho izao indray.